MSF oo aad uga naxday aadna uga uga murugsan dilkii loogu geystay laba ka mid ah shaqaalaheeda dhacdo khatar leh oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee Somalia. - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Mogadishu/ Nairobi/ Brussels, December 30, 2011- Dhakhaatiirta aan xuduuda laheyn/ Médecins Sans Frontières (MSF) waxay xaqiijineysaa si naxdin leh In labo ka mid ah shaqaalaheeda toogasho lagu dilay shalay subax ka dib tacshiirad ka dhacday gudaha xarunta hay’ada ee magaalada Muqdisho.Mid ka mid ah labada shaqaalaha gargaar waxa uu ku dhintay isla goobta kan labaadna cusbitaalka ayaa loo qaaday waxa uuna geeriyooday galabkii qaliin lagu suubiyay ka dib.
Dhibbanayaashu waxay u kala dhasheen Belgium iyo Indonesia. Philippe Havet,waxa uu ahaa 53 jir ka yimid Belgium waxa uuna ahaa xiriiriye arrimaha gargaarka deg dega ah aadna u xeel dheer waxa uuna MSF lashaqeynayay tan iyo sanadkii 2000, waxa uu ka soo shaqeeyay dalal ay ka mid yihiin Angola, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo,Indonesia,Lubnaan,Sierra Leone,Koonfur Afrika iyo Somalia.
Andrias Karel Keiluhu,oo loona yaqaanay “Kace” waxa uu ahaa 44 jir dhakhtar caafimaad lana shaqeynayay MSF tan iyo 1998 kana soo shaqeeyay wadankiisa Indonesia,Ethiopia,Thailand iyo Somalia.
Wali ma cadda sababaha dhabta ah ee ka dambeysay toogashada. Arrinta ugu muhiimsan xaggeenna haatan waxay tahay daryeelka dadka ay aadka u saameysay aafadaan haba u horreeyaan reerahoodii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen.
MSF waxa ay u wareejin doontaa qaar ka mid ah shaqaalaheeda meelo kale sababo la xiriira nabadgalyada awgeed,hasayeeshee MSF waxay sii wadeysaa kuna taagan tahay fidinta gargaarka bani’aadannimo ee Muqdisho iyo gobolada kale ee Somalia.
Philippe iyo Kace waxay Muqdisho kala shaqeeynayeen shaqaalaha MSF si loo gaarsiiyo daryeel caafimaad oo deg deg ah barakacayaasha iyo dadka kale ee degan magaalada caasimadda ah.
Aad iyo aad ayaan uga naxsannahay arrintan musiibada ah aad baana u dareemi doonaa maqnaanshaha Philippe iyo Kace. Waxaan tacsi tiiraanyo leh u diraynaa ehaladii iyo asxaabtii ay ka tageen.
MSF waxa ay si aan kala go’ laheyn uga shaqeyneysay Somalia tan iyo
1991 waxayna hadda howlgalisaa 13 mashruuc dhamaan dalka oo dhan oo ay ka mid yihiin daryeel caafimaad oo la xiriira arrimaha degdega ah ee ka jira dalka, tallaal caruur, iyo nafaqada hooyada iyo dhalaanka. MSF waxaa kale oo ay gargaar u fidisaa qaxootiga Soomaliyeed ee xeryaha Dhadhaab, Kenya iyo Doolow Caddo,Ethiopia.